नरैनापुर अध्यक्षको आक्रोश : कोरोनाबाट नागरिकको मृत्यु हुँदा पनि काठमाडौंलाई दुखेन
नरैनापुर अध्यक्षको आक्रोश : कोरोनाबाट नागरिकको मृत्यु हुँदा पनि काठमाडौंलाई दुखेन नरैनापुरमा मात्र ११३ जना कोरोना संक्रमित
दुर्गा दुलाल शनिबार, जेठ १०, २०७७, १७:५८
काठमाडौं- प्रदेश ५ को बाँकेस्थित नरैनापुर गाउँपालिकमा मात्र कोरोना संक्रमितको संख्या १ सय १३ पुगेको छ। बिहानसम्म ८६ जना संक्रमित रहेकोमा अहिले २७ जना थप भएर १ सय १३ संक्रमित पुगेका हुन्। गाउँपालिकको क्वारेनटाइनमा ७ सय मानिस छन्।
छिनछिन कोरोना संक्रमित बढिरहेको तर सरकारले कुनै पनि चासो नदिएको गाउँपालिका प्रमुखले आरोप लगाएका छन्। उनले कुनै तहका सरकारले पनि नरैनापुरको कष्ट महसुस नगरेको भन्दै दुखेसो गरेका हुन्।
'कसैलाई दुखेन नरैनापुर'
भारतबाट मानिसहरू आउने क्रम जारी रहेकाले संक्रमित थपिने क्रम पनि जारी रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले बताए। उनका अनुसार अब गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइन बेडसमेत अभाव हुन थालेको छ। थप आउनेलाई राख्ने स्थान नभएको गुनासो उनको छ।
‘अहिले पनि २७ जना थपिएको खबर सुनेको छु। म पागल हुन लागेको छु,’ गाउँपालिका अध्यक्ष शाहले भने, ‘कति पटक प्रदेश सरकारलाई खबर गरिसकेँ। कति पटक काठमाडौँलाई। कति रोइकराई गर्दा पनि कसैलाई नरैनापुर दुखेन।’
'यहाँका नागरिक पढेलेखेको मानिस होइनन्। डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी छैनन् भनेर कति पटक भनेँ भनेँ। तर कहीँबाट सुनुवाई भएन,' उनले भने, 'अब त आफैँलाई पनि गाह्रो पर्न थालिसक्यो। माथिल्लो तहले आफूलाई ढाडस दिए आफूले पनि नागरिकलाई ढाडस दिन सकिने रहेछ।'
आफ्नो कुरा कसैले नसुनेपछि सञ्चार माध्यमलाई पनि जानकारी गराएको तर कसैले यहाँको संवेदनशीलतालाई चासो नदिएको उनको भनाइ छ। 'यहाँको अवस्था एकदमै नराम्रो छ भनेर कति पटक भन्नू? कसलाई कसलाई भन्नू? कहाँ कहाँ भन्नू? आजसम्म कसैले वास्ता गरेको छैन। संघीय सरकारले चासो दिएकै छैन। प्रदेश सरकार पनि उस्तै छ।'
‘यहाँ केही छैन, माथिबाट कोही आउँदैन। कहाँ जाऔं, के गरौं? संघ र प्रदेश सरकारको के सिस्टम हो मैले कुरा बुझिरहेको छैन,’ अध्यक्ष शाहले गुनासो गरे, ‘कमसेकम मैले यहाँको अवस्था एकदमै नराम्रो छ भनेपछि त कतैबाट सुनिनुपर्ने होइन र?’
'७ सय जना क्वारेनटाइनमा राखेर व्यवस्था गर्न गाह्रो छ। सहयोग कतैबाट छैन। २५ वर्षीय युवकको क्वारेन्टाइनमा नै मृत्यु भयो। तैपनि कसैको ध्यान गएन,' उनको आक्रोश छ।
'यहाँ अझै कति यस्तै बिरामी छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तर पनि कसैलाई चासो छैन। मानिस मरेपछि पनि नसुनेको सरकारले कहिले सुन्ने हो?’
क्वारेनटाइनमा रहेका धेरै मानिसमा अझैपनि कोरोना संक्रमण भएको हुन सक्ने उनको आँकलन छ। एकै पटक ४७ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि हटस्पट बन्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएको थियो। तर हालसम्म पनि उक्त क्षेत्रमा प्रदेश र संघ सरकारबाट स्वास्थ्य र अन्य सहयोग नपुगेको अध्यक्षको भनाइ छ।
दिनदिनै यति धेरै संक्रमित भेटिन थालेपछि यो स्थानबारे धेरैको चासो बनिरकेहेको छ।
नरैनापुर गाउँपालिकाको जनसंख्या ४३ हजारको हाराहारीमा जनसंख्या छ। भारतबाट आउनेलाई राख्न त्यहाँ १३ स्थानमा क्वारेन्टाइन बनाइएका छन्। क्वारेन्टाइनमा न्यूनतम सेवा सुविधासमेत छैन।